Isalathiso sexabiso somthengi IPC, yintoni kwaye yintoni isisiseko sayo? | Ezezimali
Isalathiso sexabiso somthengi IPC, yintoni le nto kwaye isisiseko sayo?
USusana Maria Urbano Mateos | | Izaziso, Ezopolitiko
I-CPI okanye isalathiso sexabiso sabathengi sisalathiso semali kusetyenziswa ukubala kwexabiso lamaxabiso ohlobo lwamanqaku olusetyenziswa kakhulu kwikota yebhasikithi yosapho okanye kubhasikidi yosapho, egqibezela ukubala kusapho kusisixa sesiqhelo ukufunyanwa kweemveliso kunye nokuhluka kwazo ngokwexabiso, nokuba kulungile okanye kungalunganga, kuyonyusa okanye kuyaphungulwa ipesenti ngokuxhomekeke kwimeko ethile.
I-CPI yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kuqoqosho lomntu ngamnye. Ewe, iphethe ukwenza ulungelelwano kumaxabiso eempahla kunye neenkonzo zelizwe, kungoko kubalulekile ukuyazi nokwazi ukuba inxulumene ngokusondeleyo ukunyuka kwamaxabiso okutya kunye nemveliso esihlala siyithenga kwaye siyithelekise neetikiti zethu ezintle kwaye ukuba kufanelekile kwezi.
Ipesenti ephezulu yamaxabiso abathengi ayikho enye into ngaphandle kwesiphumo selahleko enkulu yamandla okuthenga kuba kubonakala kwimeko encinci yokuthenga iimpahla kunye neenkonzo ngesixa semali esilinganayo njengangaphambili. Ukuba kule ndlela kuba i-CPI ayijongi amaxabiso njengoko enjalo, oko kukuthi into eyenzayo kukuba ijonge utshintsho lwabo bonke ngokudibeneyo inyanga nenyanga nonyaka nonyaka.
Amagama ashwankathelwe kwaye kulula ukuwaqonda I-IPC sisalathiso soqoqosho oko kusinceda ukuba siqonde kwaye sazi ukuba iindleko zitshintsha njani xa kuthelekiswa phakathi kwenyanga yangoku neyogqithileyo, kodwa kuphela ezo zinto zibalulekileyo neziyimfuneko kubomi bemihla ngemihla yosapho ngalunye kwaye yiyo loo nto zonke zigxile kubhasikidi wosapho okanye ibhaskiti. Ngamafutshane, sisixhobo esiluncedo nesibaluleke kakhulu esikhathalele kwaye sikhusele ukwahluka kwedatha inyanga nenyanga kwaye ngenxa yoko silindele iingxaki zexa elizayo ngenxa yokunyuka kwamaxabiso.
1 Yintoni ukunyuka kwamaxabiso?
2 Ndingayibala njani i-CPI?
3 Kutheni le nto i-CPI ibaluleke kangaka?
4 Kubalwa liphi ixesha lexesha?
5 Ukunyuka kwamaxabiso
Asinakuthetha ngayo CPI ukuba asazi ukuba sithetha ntoni ngelixesha lokunyuka kwamaxabiso, kuba zizinto ezimbini ezihlala zihambelana. Ke siza kukunika inkcazo emfutshane apha ngezantsi.
Ukunyuka kwamaxabiso kukuwa okanye ukwehla kwexabiso lemali ngokunxulumene noko kunokuthengwa ngohlobo oluthile ngokutshintshela loo mali; Umzekelo, ukuba sithenga into yonke imihla kwaye njengoko iintsuku zihamba, le ndleko inyukile, kuba singamaxhoba okunyuka kwamaxabiso, ngamafutshane, ukunyuka kwamaxabiso kukunyuka kwexabiso lezinto esizithenga rhoqo, kanye ukuba sihlawulela inkonzo kwaye oku kuyonyusa indleko zayo ukusukela kwinto enye ebesiyenzile ngaphambili ngoku sinyanzelekile ukuba sihlawule ngaphezulu.
Ngoku uyabona ukuba ibaluleke kakhulu kuba iyasinceda lawula uqoqosho lwelizwe, kuba ezinye zeengxaki zamanye amazwe emhlabeni zibangelwa kukusilela okukhulu kolawulo lokunyuka kwamaxabiso. Eyona nto isempilweni kuqoqosho kukuba amaxabiso anyuke ngokuphakathi kuba ukwehla kwamaxabiso akulunganga kulungelelwaniso lwezoqoqosho lwamazwe njengoko oku kubangela ukuzithemba okugqithisileyo kutyalo-mali kunye nokulibaziseka kokusebenza kwabo, okukhokelela ekubeni bangavelisi nzuzo kwixa elizayo. oko kubangela ukungabikho kwemisebenzi kunye noxinzelelo olukhulu lwezoqoqosho.
ukuba lawula konke oku kunyuka kwamaxabiso Kufuneka siyilinganise yiyo ke le nto kusenziwa le bhasikiti okanye usapho.
Ndingayibala njani i-CPI?
Kukho iimveliso ezingapheliyo ezithengiswayo kunye neenkonzo esinokuzifumana sonke kwaye kuya kuba nzima ukuba bonke babhalise. Kungenxa yoko le nto ifayile ye- I-CPI ibalwa ngokusekwe kuqikelelo lwento esiyibiza ngokuba yibhaskithi Kwaye yile ndlela ikhetha ngayo ezinye iimveliso kunye neenkonzo kunye neefom zecandelo elinamaqela kunye namaqelana ngokwahlukeneyo. Ingobozi yenziwe zezona zinto zixhaphakileyo kunye neenkonzo eziyimfuneko neziqhelekileyo zosapho oluqhelekileyo kunye noqoqosho oluqhelekileyo noluyinyani.
Ukwenza ubalo lwe-CPI uthelekiso lwenziwa kwiindleko zotshintsho lweemveliso ezingama-489. Oku kwenziwa ngophando olwenziwe kumaziko angama-30.000 koomasipala abali-177 bommandla waseSpain, oko kukuthi, iingqukuva ezingama-52 kunye ne-125 ezingezizo ezekomkhulu; Olu phando luqhutywa ngomnxeba, ngefeksi, nge-imeyile okanye ngobuqu. Kubalulekile ukugxininisa ukuba olu phando alubandakanyi nakuphi na ukuthengwa esele kwenziwe izibonelelo, iibhalansi okanye ukuthengiswa.
Ngoku siza kuchaza indlela yokwenza ubalo olulula kakhulu kwaye lushwankathelwe koku kulandelayo:
Intengo entsha yento yenani elidala ngaphezu kwexabiso elidala lento kwinto endala.
Izibonelelo ezifunyanwa ziindidi ezifana nezi zilandelayo:
Iimveliso ezenziwe zodwa, intlawulo ngobubele, ukutya simahla okanye ibhonasi, umvuzo wepropathi xa ungumnini okanye ubolekwe, simahla, njl. Njengamaqela angahleliyo kunye nelothari.
Kutheni le nto i-CPI ibaluleke kangaka?
El I-CPI yenye yeendlela ezininzi zokulinganisela kubomi bezoqoqosho yelizwe njengoko sisixhobo esiphambili sokubonisa ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuguquka njani. Oku kubaluleke kakhulu kusekwe kwinto yokuba sesona sikhombisi siphambili kuhlalutyo nasekufezekisweni kokubalwa kokunyuswa kwemivuzo, phakathi kwezinye izinto ezinje ngengeniso evela kumakhaya okanye kwindawo zeshishini.
Kungenxa yoko le nto i-CPI isetyenziselwa izivumelwano ezahlukeneyo zabasebenzi ezisisiseko sokufezekiswa kokunyuswa kwemivuzo ekuqaleni konyaka ngamnye ekuhlala phantse kuyinxalenye yesi sivumelwano kuthwala ipesenti encinci eyonyukayo. Ikwachaphazela Ukunyuka kwengqeshiso yonyaka okanye ukubala oko kufuneka kunikwe inkxaso yokutya, phakathi kwabanye.
Kwakubalulekile ukuba Ukunyuka kwepenshoni Utshintsho lwenziwe kwi-2014 ebonisa ukuba abasayi kuphinda badityaniswe kolu balo, oko kukuthi, luya kwenziwa ngokwenza intsebenzo encinci ethi, ibalwe nezinye izinto, ivelise esi siphumo. Kodwa isalathiso se I-IPC iya kuba ngumgangatho wokuthelekisa kuba ukuba ingaphantsi kwebar ethelekisiweyo, uhlengahlengiso kwinto esekwe yi-IPC kuya kufuneka yenziwe.
I-CPI ayichaphazeli ixabiso lezintoIlawula kuphela xa iindleko zabo zinyuka okanye zisezantsi kwaye zenza ipesenteji ehamba ngokwezo mveliso.
Zininzi iindlela zokuyibonisa, kodwa eyona nto ixhaphakileyo kukwenza zombini ezi zinto zivelisa isikhombisi kunye nokwahluka kwinyanga ephelileyo.
Kubalwa liphi ixesha lexesha?
Yenziwa inyanga nenyanga kwaye ipapashwa phakathi enyangeni elandelayo kwinyanga esele ibaliwe. Ukuba unjalo kuyanceda ukuba ubone ukuba imeko yezoqoqosho iyatshintsha kwaye kunjalo nokunyuka kwamaxabiso ngexesha elithile. Olu tshintsho luqhubekayo lunika ithuba lokuqikelela kwaye lusetyenziswa ngurhulumente okanye ziinkampani ukwenza izigqibo malunga nento abaza kuyenza kwixesha elizayo.
Ukunyuka kwamaxabiso okusisiseko sisiphumo sokunyuka kwe-CPI kwaye xa ucalucalulo phakathi kweemveliso zamandla kunye nokutya okucutshungulwayo ekubeni ngabo baneenguqu ezingazinzanga ngezizathu ezahlukeneyo
Iimveliso zamandla: Eli candelo libandakanya izibaso ezifana negesi, ipetroli, umbane, njl.
Iimveliso zokutya eziqhubekileyo: Eli candelo libandakanya iziqhamo, ukutya okuziinkozo, imifuno kunye nezinye iimveliso ezikolu luhlu.
Ukudumba okungaphantsi kusetyenziswa njengesixhobo esisezantsi apho iimpahla neenkonzo zicalucalulwa kwezo zingazinzanga kwisimilo kwaye ezingezizo ezempawu zezinye, oku kusinika ukuqonda ukuba ingxelo ekunxulumene nayo iphantsi kunaleyo malunga nokuhla kwamandla emali ngokubanzi.
Kungenxa yoko le nto i isiphawuli esingabuyisekiyo esisinceda siqonde ukunyuka kwamaxabiso kwaye zeziphi iibhanki ezithatha isigqibo kwaye kwenzeka ntoni kuqoqosho kwihlabathi liphela.
Sesona sixhobo sibalaseleyo sokuba iiprojekthi ziyahluka ngokwamaxabiso ngaphandle kwempazamo nangalo mmiselo wotshintsho kwisalathiso sexabiso sabathengi (CPI)
Indlela yokubala isiseko sokunyuka kwamaxabiso kukususa amacandelo ama-2 emveliso (amandla kunye nezinto ezenziweyo) ukuze uyifumane.
Ukunyuka kwamandla emali kuyarekhodwa kwaye kuncitshiswe kwiZiko lezeNkcukacha-manani leSizwe (i-INE) ngokudibeneyo neCPI ngokubanzi kunye neCPI ehambelanayo.
Nje ukuba siyiqonde into eyiyo i-CPI kunye nokubaluleka kwayo kuqoqosho lwethu kweli nakwilizwe liphela, sinokuziqonda izibonelelo ezisizisela zona, kuba iyasinceda ukuba siqonde xa kukho into engalunganga kwiinkqubo zoqoqosho kuba kuyakubakho ukwanda kwexabiso lezinto kunye neenkonzo ezibandakanya iimfuno zethu zemihla ngemihla zokuphila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Ezopolitiko » Isalathiso sexabiso somthengi IPC, yintoni le nto kwaye isisiseko sayo?
Ichaphazela njani ukusuka i-Great Britain iye eSpain? Amaqhosha amahlanu okuyiqonda